Messi oo hal arrin ku dhaleeceeyay maamulka Barcelona, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Inter Milan – Gool FM
Messi oo hal arrin ku dhaleeceeyay maamulka Barcelona, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Inter Milan
(Barcelona) 03 Okt 2019. Xiddiga reer Argantina ee Lionel Messi ayaa ku dhaleeceyn maamulka kooxdiisa Barcelona sababa la xiriira qaabka socdaalka ay kooxda ku baxdo xilliyada diyaar garowga kahor bilaabashada xilli ciyaareedka.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa muujiyay arragtidiisa ah in arrintan ay si weyn u dhaawacday kooxda iyo tababarkiisa.
Messi ayaa ka qeyb qaatay guushii ay kaga gaareen 2-1 kooxda Inter Milan kulankii xalay ka dhacay garoonka Camp Nou ee ka tirsanaa kulmada 2-aad GROUP F ee tartanka Champions League.
Kaddib marka ay ciyaarta dhamaatay Lionel Messi ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta:
“Waxaan ku soconaa wadada saxda ah, waan ognahay inaan ku jirnay xaalad adag, laakiin hareeradeena iyo dhamaan kooxaha kale waaweyn ee Yurub waxay ku nool yihiin xaalad adag iyo bilow adag ee xilli ciyaareedka ah”.
“Waqtiga diyaar garowga ee kahor xilli ciyaareedka, waxaan si weyn ugu dhibanahay dhaq-dhaqaaqa waxyaabaha qaar, ma doonayo inaan qof dhaleeceeyo laakiin tani waa xaqiiqada jirta, markaan u baxno safarrada xagaaga, si fiican uma tababarano”.
“Laakiin hadda waxaan sameyneynaa horumar, wax walibana waxay ku socdaan jihada saxda ah, waxa aan sheegay ma ahan lacag, laakiin waa run waana fahamsanahay in kooxdu ay u ciyaareyso kulamada noocan oo kale ah sida ay sameeyaan kooxaha kale ee waaweyn, waan fahansanahay in arrimahan oo kale ay muhiim yihiin, laakiin si tartiib tartiib ah ayaan ku hagaajin doonaa wax walba”.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan caawiyo kooxda, waxaan hadda ciyaaray kulan buuxa markii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan, waxaan awoodaan inaan dagaalamo, waana ku faraxsanahay inaan ciyaarta si fiican ku dhameysto”.
"Uma adeegsan doono Pogba shaxda Man United xitaa haddii uu diyaar yahay” – Tababare Solskjær
“Liverpool waa inay si deg-deg ah cashar uga bartaa kulankii Salzburg” – Klopp